Bogga Ciyaaraha, 01 November 2018
Khamiis 1 November 2018
Santiago Solari oo guul ku billaabay
Tababaraha cusub ee kooxda Real Madrid Santiago Solari ayaa guul ku billaabay kulankiisi ugu horreeyay ee uu kooxda hogaamiyo, kaddib marki ay xalay 4-0 ku mareen kooxda Melilla ciyaar ka tirsaneyd wareega 1-aad ee tartanka Copa del Rey.
Milan oo soo gaartay kaalinta afraad
Kooxda AC Milan ayaa marki ugu horreysay tan iyo inti uu billowday xilli ciyaareedka cusub gaartay kaalinta afraad kaddib marki ay xalay 2-1 uga badisay kooxda Geona.
Chelsea, Arsenal iyo Tottenham oo wada badiyay
Kooxda Chelsea ayaa u gudubtay wareega sideeda koox ee tartankan kaddib ay 3-2 ku garaacday naadiga Derby County oo ka mid ah kooxaha heerka labaad.
Liverpool oo dardartay Red Star Belgrade
Liverpool ayaa xalay 4-0 ku garaacday kooxda Red Star Belgrade. Laba ka mid ah goolasha waxaa dhaliyay Mohamed Salah oo hadda noqday laacibki ugu horreeyay oo muddo gaaban gudaheed Liverpool ugu dhaliya 50 gool.
Paris St Germain 2-2 Napoli
Ciyaar ka tirsaneyd Koobka Kooxaha Horyaalada Yurub aadna indha loogu hayay ayaa xalay magaalada Paris ku dhexmartay kooxaha Paris St Germain iyo Napoli, waxaana ay labada koox iskula ag-dhaceen barbarro 2-2 ah.
Barcelona oo 2-0 ku garaacday Inter Milan
Ciyaaro xiiso leh oo ka tirsan wareega 1-aad ee koobka kooxaha horyaalada Yurub ayaa xalay ka dhacay magaalooyin dhowr ah oo ku yaalla Qaaradda Yurub.
Ronaldo oo rikoor cusub u dhigay Yurub
Usain Bolt oo ku biiraya Valletta FC
Kooxda difaacaneysa horyaalnimada dalka Malta ee Valletta FC ayaa u soo bandhigtay orodyahanki hore ee ciyaaraha orodka fudud ee adduunka Usain Bolt heshiis uu kooxdani kaga mid noqonayo si uu ugu ciyaaro kubadda cagta.
Ingiriiska oo 31 sano kaddib ka badiyay Spain
Waxaa xalay dhacay ciyaaro ka tirsan tartanka cusub ee Uefa Nation League, kaas oo uu xiriirka kubadda cagta Yurub ku beddelay ciyaarihi saaxibtinimo ee ay ciyaari jireen xulalka kubadda cagta Yurub.
Ronaldo oo wajahaya eedyemo kufsi
Cayaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa laga reebay labada cayaar ee soo socota ee xulka dalka Portugal, xilli laacibkan weyn uu Mareykanka ku wajahayo eedyemo la xiriira kufsi.
Ciyaarihi Xalay ee Horyaalka Talyaaniga
Kooxda AC Milan ayaa ku guuldarreysatay in ay kulankeedi saddexaad oo xiriir ah ay badiso horyaalka Serie A-da Talyaaniga, kadib marki ay xalay bar-barro 1- 1 ah la dhaafi weyday Empoli.
Aguero oo saxiixay qandaraas cusub
Kooxda Manchester City iyo weeraryahan Sergio Aguero ayaa ku heshiiyay in laacibkan reer Argentina uu kusii nagaado naadiga ilaa sannadka 2021-ka, kaddib marki uu saxiixay qandaraas cusub.